Page2– Nepal Trending
नेपाल ट्रेण्डिङ	 १८ असार २०७७, बिहीबार १६:५७ 0
काठमाडौं। वैज्ञानिकहरुले तालुखुइले मानिसहरुलाई को'रो'ना'भा'इ'र'सको ख'तरा अधिक हुने र मृ'त्यु हुने सम्भावना पनि अधिक हुने बताएका छन् । वैज्ञानिकहरुका अनुसार कपाल झर्नुको पछाडिको कारक एस्ट्रोजोन हर्मोन हो । को'रो'नाभाइ'र'सका कैयौं सबैभन्दा…
कस्तो अचम्म ! साढे ३ खर्ब मूल्यको ८३ टन सुन नक्कली ! सुन भनेर राखेको तामा निस्कियो
नेपाल ट्रेण्डिङ	 १८ असार २०७७, बिहीबार १६:४८ 0
काठमाडौं। चीनको कूल सुन भण्डारणको करिब ४ प्रतिशत अर्थात ८३ टन सुन नक्कली भएको खुलासा भएको छ । वुहानमा मुख्यालय रहेको चीनको ठूलो ज्वेलरी कम्पनीले यो घोटाला गरेको पाइएको छ । बुल्गारियामा मुख्यालय रहेको आर्थिक वेबसाइट जीरो हेजका अनुसार चीनको…
नेपाल ट्रेण्डिङ	 १८ असार २०७७, बिहीबार १६:४६ 0
﻿काठमाडौं – नेपालको राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप रहने तथ्यलाई फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वीकारेका छन् । आफ्नो चाहनाविपरीत हुने नेपालको राजनीतिक गतिविधिमा भारतको हस्तक्षेप रहँदै आएको छ । भारतीय चाहनाविपरीत संविधान जारी गर्दा…
२३ वर्षकी एलिसा गौतमले फेसबुकमा लाईभ गरि आ*त्महत्या गर्नुको कारण खुल्यो
नेपाल ट्रेण्डिङ	 १८ असार २०७७, बिहीबार १२:३० 0
दाङ, १८ असार । दाङको तुलसीपुरमा एक युवतीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भिडियो लाइभ गर्दै आ*त्महत्या गरेकी छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ रानीजरुवाकी अन्दाजी २३ वर्षकी एलिसा गौतमले गत राति फेसबुकमा लाइभ गरेर आ*त्महत्या गरेको जिल्ला प्रहरी…
फेसवुक लाइभमा आएर २३ वर्षकी युवतीले यसरी लगाइन् पा’सो (भिडियो हेर्नुस्)
नेपाल ट्रेण्डिङ	 १८ असार २०७७, बिहीबार ०९:५४ 0
तुल्सीपुर । दाङमा अनौठो घटना भएको छ । एक एक युवतीले फेसबूक लाइभमा आएर झु’ण्डि’एर देह त्याग गरेकी छिन् । भिडियो सार्वजनिक भएको छ । अन्दाजी २३ वर्षीया युवतीले पछ्यौरीले पा’सो लागाएर देह त्याग गरेको भिडियो सार्वजनिक गरेकी हुन् । फेसवुकमा लाइभ…
नेपाल ट्रेण्डिङ	 १८ असार २०७७, बिहीबार ०९:३० 0
दोहा : आफ्ना इच्छा, चाहना वा आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आफ्नो देश छाडेर रोजगारिका लागि अन्य मुलुक जानुलाई नै वैदेशिक रोजगारिका रुपमा लिइन्छ । नेपालमा औद्योगिक क्रियाकलाप अत्यन्तै कमजोर भएको र कृषिमा पनि समसामयिक आधुनिकीकरण गर्न नसक्नाले आयमा…
काडमाडौं। भारतले ५९ वटा चिनियाँ एप बन्द गरेपछि यस विषयमा चीनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले भने ‘यो पूरा घटनाक्रमले चीन चिन्तित छ र पूरै मामिलाको जानकारी लिइरहेको छ ।’ हिजो मोदी सरकारले लोकप्रिय…
नेपाल ट्रेण्डिङ	 १७ असार २०७७, बुधबार २१:५८ 0
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाको (नेकपा) जारी स्थायी कमिटी बैठकमा बुधबार बोल्ने ४ नेताहरुले प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका छन्। स्थायी समितिको पाँचौ दिनको बैठकमा बुधबार ५ जनाले धारणा राखेका थिए। पाँचमध्ये चार…
सुनको भाउले आज बुधबार पनि बनायो नयाँ रेकर्ड ! यस्तो छ आज सुनको भाउ
नेपाल ट्रेण्डिङ	 १७ असार २०७७, बुधबार १३:२७ 0
काठमाडाैं, १७ असार । सुनको भाउ अहिलेसम्मकै महंगो भएको छ । सुन आज तोलामा ५ सय रुपैयाँ बढेर ९१ हजार ७ सय रुपैयाँ पुगेको हो । तेजाबी सुन भने प्रतिताेला ९१ हजार २६५ रुपैयाँ पुगेको छ । यो भाउ नेपालकै इतिहासमा हालसम्मकै उच्च हो । यसअघि आइतबार…
अमृत भन्दा कम छैन तुलसी , यी हुन् तुलसी फाईदाहरु ! जानीराखौं
नेपाल ट्रेण्डिङ	 १७ असार २०७७, बुधबार ०९:३७ 0
काठमाडौँ । तुलसी औषधीय गुण भएको बहुउपयोगी वनस्पति हो । यो हरेक रोगका लागि उत्तिकै उपयोगी छ । आयुर्वेदमा समेत तुलसीलाई विभिन्न रोगको अचुक औषधिका रूपमा लिइएको छ । यसैकारण धार्मिक मान्यताअनुसार तुलसीलाई भगवान् विष्णुको रूपमा लिइने गरिएको…